Sajhasabal.com | Homeमहिलाका सबैभन्दा संवेदनशील ९ अंगहरु यस्ता छन् !
‘सरकारलाई काभ्रेलीका तर्फबाट डल्लै धन्यवाद’
श्रोतालाई प्रधानमन्त्रीको गीत
यी रक्त समूह हुनेहरुलाई कोरोना संक्रमणको खतरा उच्च खतरा
यस्तो रहनेछ आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान
बेलायतद्वारा कोरोनासँग जुध्न नेपाललाई थप आर्थिक सहयोग
मलेसियाको प्रहरी हिरासतमा नै एक नेपालीको मृत्यु
साउदीबाट स्वदेश फर्कन १० हजार नेपालीको निवेदन, उडानको मिती नतोकिदा अन्योल
महिलाका सबैभन्दा संवेदनशील ९ अंगहरु यस्ता छन् !
१ कम्मर: महिलाको कम्मर पुरुषको सबैभन्दा आँखा पर्ने स्थान हो । पातलो कम्मर हुने महिलाको सुन्दरताबारे सदियौं देखि चर्चा हुँदै आएको छ । बारुली कम्मर चलाउँदा पुरुष र महिला दुवैले रोमान्चित अनुभव गर्छन् ।२ पुट्ठो: महिलाको पुट्ठो अर्थात अंग्रेजीमा बट भनिने भाग पनि निक्कै संवेदनशील मानिन्छ । यो अंगप्रति पुरुषको पनि विशेष आकर्षण हुन्छ । यौन सम्बन्धमा उत्तेजनामा समेत यो भागको भूमिका हुन्छ ।
३ पेट: पुरुषहरु महिलाको पेट हेर्छन् । सारी लगाउँदा हल्का देखिने महिलाको पेटले पुरुषलाई आकर्षित गर्छ । त्यति मात्र होइन पेट चलाउँदा महिलहरु यौनिकरुपमा उत्तेजित हुन्छन् । पातलो पेट भएका महिलाहरुप्रति पुरुषको आकर्षण बढि हुन्छ ।
४ बक्षस्थल: महिलाका बक्षस्थल सेकेण्ड्री यौन अंग पनि हुन् । किन भने यौन सम्बन्धको समयमा बक्षस्थलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । स्त्रीको शरीरमा हुने अंग मध्ये बक्षस्थल सबैभन्दा संवेदनशील अंग पनि हो ।
५ पिठ्युँ: पुरुषहरु महिलाको पिठ्युँप्रति आकर्षित हुन्छन् । त्यति मात्र होइन पिठ्युँ यौनिकरुपमा पनि उत्तेजना पैदा गर्ने भाग हो । यो महिलाको सबैभन्दा संवेदनशील भाग मध्ये पर्छ ।
६ आँखा: कुनै पनि महिलाको आँखाले ती स्त्रीको चरित्र बताउँछ । आँखाबाट पुरुष आकर्षित हुन्छन् । आँखाले उत्तेजक र मनमोहक भूमिका पनि खेल्न सक्छ ।
७ मुस्कान: भलै मुस्कान अंग होइन तर पुरुष स्त्री सम्बन्धमा यसको भूमिका महत्वपूर्ण छ । पुरुषलाई घाइते पार्ने महिलाको सबैभन्दा घातक हतियार भने मुस्कान हो । मुस्कानले पुरुषहरु पग्लिन्छन् । मुस्कानले पुरुषहरुलाई उत्तेजित पनि पर्छ ।
८ ओंठ: ‌ओंठ यौनिक हिसावले र सौन्दर्यको हिसावले दुवै हिसावले महत्वपूर्ण अंग हो । ओंठमा चुम्बन गर्दा स्त्रीहरु सबैभन्दा उत्तेजित हुन्छन् भने पुरुषहरु पनि महिलाको ओंठमा ध्यान दिन्छन् ।
९ कपाल: महिलाहरुको कपाल चलाउन पुरुषहरुलाई मन पर्छ । कपाल चलाइदिँदा महिलाहरु पनि उत्तेजित अनुभव गर्छन् । कपाल समेत महिलाको संवेदनशील अंगमा पर्छ । -एजेन्सीको सहयोगमा